काठमाडौँ, मङ्सिर ५ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले जिएसएम प्रिेपेड मोबाइल सेवामा दशैँ, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा गरेको कल र डाटा वापतको १० प्रतिशत रकम आज बोनसका रुपमा बाँडेको छ। बोनसको कूल रकम १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार ३३६ रुपियाँ रहेको टेलिकमका प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले जानकारी दिइन्। असोज ३०देखि मंसिर ४ गतेसम्म उपभोग गरिएको सेवा वापतको कूल रकमको १० प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा ग्राहकलाई फिर्ता गरिएको हो। यो रकम टेलिकम कै नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने रकमबाट कट्टा हुँदै जाने र बोनस वापतको रकम सकिएपछि मात्र मुख्य ब्यालेन्सको रकम काटिने टेलिकमले जनाएको छ। प्राप्त बोनस रकम दुई महिनाभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसैगरी जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल, ल्यान्डलाइन, सी फोन पोस्टपेडका ग्राहकलाई उपलब्ध गराइएको छुट कात्तिक महिनाको बिलमा समायोजन गरिने टेलिकमले जनाएको छ। कम्पनीले कात्तिक १ गतेदेखि एक्सेस कोड १४२४ मार्फत् पाँच देशमा हुने नयाँ महसूल दरलाई मंसिर ३० सम्म निरन्तरता दिइने जनाएको छ। नयाँ महसूल अन्तर्गत अस्ट्रेलियामा ७/७५, चीन र हङकङमा ३ रुपियाँ, बंगलादेशमा ४ रुपियाँ र कुवेत र बहराइनमा ८ रुपियाँ प्रति मिनेट शुल्क लाग्छ।
Posted by मेरो भनाई at 7:09 PM No comments:
एक हप्तामा ६ कम्पनीले लिए वाइम्याक्स इन्टरनेट
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ नागरिक - नेपाल टेलिकमले कात्तिक २७ गतेदेखि सुरु गरेको तारविहीन द्रुत गतिको 'वाइम्याक्स' सेवा हिजोसम्ममा छवटा कम्पनीले मात्रै लिएका छन्।कम्पनीका सहप्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार चाडपर्वका कारण र नयाँ प्रविधि भएकाले यसमा ग्राहकमा जानकारी हुन नसकेको बताए। कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार कर्पोरेट ग्राहकका लागि ५० प्रतिशतको प्रवर्द्धनात्मक छुट सुविधासहित पहिलो चरणमा सो प्रविधिमार्फत सेवा उपलब्ध गराएको छ। यो सेवा बुटवलमा पनि चाँडै सुरु हुनेछ। रासस
Posted by मेरो भनाई at 7:06 PM No comments:
काठमाडौं, कात्तिक २८ (नागरिक) - सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स सुरु गरिसक्दा निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीलाई यस्तो सेवा चलाउन दिने योजना अलपत्र परेको छ। सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत टेलिकमले वाइम्याक्स इन्टरनेट 'कर्पोरेट हाउस' लाई मात्र दिने भएको छ। निजी क्षेत्रलाई वाइम्याक्स इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने आधार सरकारले डेढ वर्षसम्म नबनाएकाले प्रविधिप्रति चासो राख्ने युवा पुस्ता र इन्टरनेटको विकल्प खोजीमा रहेकाहरुले यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको छ। राजधानीका व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक तथा वित्तीय संस्था, कूटनीतिक नियोग, सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई मात्र वाइम्याक्स सोमबारदेखि टेलिकमले वितरण सुरु गरेको छ। २०६८ जेठमा भएको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेरै प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रका टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटालाई वाइम्याक्स चलाउन दिने निर्णय भएको थियो।
Posted by मेरो भनाई at 8:07 PM No comments:
काठमाडौंमा कात्तिक २७ देखि वाइम्याक्स इन्टरनेट (रेटसहित)
काठमाडौं, कात्तिक २३ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमले द्रूत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (वाइम्याक्स) सेवा काठमाडौंबाट सुरु गर्ने भएको छ। टेलिकमले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कात्तिक २७ गतेबाट काठमाडौंमा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका ब्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक संस्थालगायतलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तीको पूरा पाठ
नेपाल टेलिकमले दु्रत गतिको व्रोडब्याण्ड इन्टरनेट WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) सेवा २०६९ कात्तिक २७ गते देखि काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न लागेको छ। वाइम्यक्स ( WiMAX) सेवा प्रथम चरणमा काठमाडौ उपत्यकाका व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, कुटनैतिक नियोग, पर्यटन व्यावसायी, सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी निकायलगायत संघसंस्थाहरुलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
वाईम्याक्स नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवा मध्ये सवैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा हो। यसबाट कम्तिमा २५६ किलोविट प्रतिसेकेण्ड (256 Kbps) को दरले डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यू.एस.वि. : Modem मार्फत desktop, laptop मा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
यो प्रविधिलाई ग्राहकसमक्ष ल्याउनका लागि कम्पनीले नेपाललाई २ वटा क्षेत्रमा वाँडेर काम गरिरहेको छ। पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गत काठमाण्डौ उपत्यकालगायत पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र समावेस गरिएको छ भने, पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र रहेका छन्।
प्रथम चरणमा पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गतको काठमाण्डौ उपत्यका भित्र (पूर्वमा साँगा देखि पश्चिममा वलम्वु सम्म तथा उत्तरमा वुढानिलकण्ठ देखि दक्षिणमा दक्षिणकाली क्षेत्र वरिपरि सम्म) सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतको पोखरा र भैरहवामा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसपछि देशका अन्य क्षेत्रमा सेवा वितरण गरी सेवा प्रारम्भ गरेको एक वर्ष भित्र मुलुकभर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। यस कार्यक्रम अनुसार देशभर दुई लाख लाइन वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
मुलुकभर Broadband Internet सेवा पुर्‍याउने सरकारी नीति तथा सेवा वितरण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत महत्व दिने नेपाल टेलिकमको लक्ष्य वमोजिम यो सेवालाई कम्पनीले प्राथमिकता साथ अघि वढाएको हो। Wireless प्रविधिमा आधारित यो प्रविधिलाई इन्टरनेटको चौथो पुस्ताको प्रविधिको रुपमा लिइन्छ। यो सेवाबाट ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालगायत पदयात्रामा जाने पर्यटकहरुसमेत लाभान्वित हुनेछन्। यो प्रविधि मार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान हुने भएकोले वैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र, विश्वविद्यालय, कुटनैतिक नियोग तथा प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले बढी फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताहरुको बढी भिड हुने क्षेत्रहरु जस्तो : विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेष्टुरेन्ट, एयरपोर्ट, पार्क, सपिङ्ग मल, वसपार्क, तथा पर्यटकहरुको आवतजावत वढी हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करिब १५ सय स्थानमा WiFi Hotspot निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। यी स्थानहरुमा सस्तो तथा सरल रुपमा WiFi बाट इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
नेपाल टेलिकम र अमेरिकन कम्पनी एयरस्पान नेटवर्क वीच गत फागुनमा भएको सम्झौता वमोजिम यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
यो प्रविधि मार्फत इन्टरनेट चलाउनको लागि ३ किसिमको क्षमताको आधारमा Volume Based प्याकेजको महसुल दर निर्धारण गरिएको छ भने, हाल केहि महिनाको लागि 1 Mbps क्षमताको 30 MB वा सो भन्दा माथिको प्याकेज ब्यवसायिक संस्थाहरुलाई मात्र उपलब्ध गराइने छ। Volume Based अनुसारको महसुल दर निम्न बमोजिम कायम भएको छ :
1. Volume Based Package को महसुल दर (Monthly)
For data rate of 256 kbps, For data rate of 512 kbps, For data rate of 1Mbps or above
Volume (GB) Tariff (Rs.), Volume (GB) Tariff (Rs.), Volume (GB) Tariff (Rs.)
5 650.00 8 8,50.00 12 1,340.00
10 1,100.00 12 1,250.00 20 2,200.00
15 1,500.00 20 2,000.00 32 2,900.00
20 1,800.00 30 2,700.00 48 4,300.00
30 2,500.00 40 3,400.00 60 5,190.00
2. WiFi Hotspot सेवाको महसुल दर
Voucher (Rs.) Data Volume (MB) Validity Period (Days)
5‍0.00 200 10
100.00 500 30
200.00 1500 60
उपभोक्ताले WiMAX बाट इन्टरनेट चलाउनका लागि सर्वप्रथम CPE (Customer Premises Equipment) खरिद गर्नुपर्छ। यो उपकरण Outdoor, Indoor र USB Dongle गरी तीन किसिमको हुन्छ। Outdoor Device ले १५ किलोमिटर दुरीसम्म Signal लिई इन्टरनेट चलाउन मिल्दछ भने, Indoor Device ले ५ किलोमिटर भित्र इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। हाल नेपालको बजारमा WiMAX मार्फत इन्टरनेट चलाउन मिल्ने CPE उपकरणको सहज उपलब्धता नभएकोले कम्पनीलेनै WiMAX सेवाको शुरुवातसँगै उपकरण पनि बिक्री वितरण गर्ने भएको छ। कम्पनीले सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकमको नवनिर्मित भवनबाट ग्राहकहरुलाई यो सेवा प्रदान गर्न लागेको छ।
मिति : २०६९।०७।२३ प्रवक्ता
विश्वका ८६ प्रतिशतको हातमा मोबाइल
काठमाडौ, कार्तिक २० - विश्वका ८६ प्रतिशत जनताको हातमा मोबाइल पुगेको छ । केही वर्षदेखि आधारभूत फोन प्रयोगकर्ताको संख्या घटे पनि मोबाइल सेवामा भएको तीव्र विकासले प्रयोगकर्ता बढेको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन -आईटीयू) को २०१२ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०११ मा विश्वका ६ अर्ब मानिसले मोबाइल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आईटीयूको प्रतिवेदनअनुसार विकसित मुलुकमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या उच्च रहेको छ । 'विकसित मुलुकमा प्रति एक सय जनतामा १ सय २२ जनाले मोबाइल प्रयोग गरेका छन्,' प्रतिवेदनमा छ । अमेरिका र क्यानडामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यामा उच्च वृद्धि भएकाले विकसित देशमा एक जनाले एकभन्दा बढी मोबाइल लिएको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार विकासशील मुलुकमा ७८ प्रतिशत जनताले मोबाइल सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । मोबाइल प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा बढी संख्या चीनका छन् । चीनमा मात्र १ अर्ब मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । आईटीयूले सन् २०१२ मा भारतमा पनि मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशत मोबाइल ग्राहक बढेका छन् ।विकसित मुलुकमा सन् २०११ मा ११ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन् । मोबाइल क्षेत्रमा बढेको प्रतिस्पर्धाका साथै सस्तो सेवा र उपकरणको कारण ग्राहकको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आईटीयूको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि आधारभूत फोन घनत्व भने घटेको छ । सन् २००५ मा विश्वका झन्डै २० प्रतिशत जनतामा आधारभूत फोन पुगे पनि अहिले घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २००६ देखि सुरु भएको मानिने मोबाइल ब्रोडब्यान्डका ग्राहक बढेर झन्डै १६ प्रतिशतले यो सेवा लिन थालेका छन् ।नेपाल तीन स्थान तल झर्‍यो मोबाइल क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिएको मानिए पनि नेपाल सूचना सञ्चार तथा प्रविधि विकास परिसूचकमा तल झरेको छ । सन् २०१० भन्दा तीन स्थान तल झरेर १ सय ५५ मुलुकमा नेपालमा १ सय ३७ औं स्थानमा आएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पनि सबैभन्दा कम सूचना प्रविधिको विकास गर्ने मुलुकमा परेको छ ।दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा अगाडि १ सय ५ औं स्थानमा श्रीलंका रहेको छ । भारत १ सय १९ औं स्थानमा छ । भुटान १ सय १८ स्थान, पाकिस्तान १ सय २७ औं स्थानमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता भएको चीन ७८ औं स्थानमा रहेको छ ।सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकास गर्ने मुलुकको पहिलो स्थानमा एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया छ । दोस्रो स्थानमा स्विडेन, तेस्रोमा डेनमार्क, चौथोमा आइसल्यान्ड र पाँचौंमा फिनल्यान्ड छन् ।यी मुलुकहरूको स्थानमा अघिल्लो वर्षको जस्तै छ । नेदरल्यान्ड भने एक स्थानमा माथि उक्लिएर छैटौं स्थानमा छ । लक्जेम्बर्ग एक स्थान तल झरेर सातौं स्थानमा पुगेको छ । जापान आठौं स्थानमा रहेको छ । बेलायत एकै वर्ष ५ स्थानमा माथि उक्लिएर नवौं स्थानमा पुगेको छ ।
Posted by मेरो भनाई at 9:05 PM No comments:
उपकरणविहीन मोबाइल टावर
योगेश खतिवडा काठमाडौ, आश्विन १३ - उच्च गतिको इन्टरनेट दिने भन्दै नेपाल टेलिकमले झन्डै ६ वर्षअघि थर्ड जेनरेसन (थ्री जी) सेवा भित्र्यायो । तर टुजीजस्तै थ्री जी पनि गुणस्तरीय हुन सकेन । थ्री जी विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले मोबाइल टावर (बीटीएस) मा चाहिने सबै उपकरण दिएन । त्यसले गुणस्तरमा असर गर्‍यो । 'बीटीएसहरूलाई नियन्त्रण गर्न 'बेस स्टेसन कन्ट्रोलर (बीएससी) र बीटीएस टावर जोड्ने स्विच पोर्ट हुन्छ,' टेलिकमका एक कर्मचारी भन्छन्, 'ती बीटीएसलाई बेस स्टेसनमा जोड्न आवश्यक पर्ने सबै पोर्ट जेडटीईले उपलब्ध गराएन र यसले गुणस्तरमा समस्या पर्‍यो ।' उनका अनुसार एउटा बेस स्टेसनमा चार पोर्ट भएका २० बीटीएस जोडिएको छ भने स्टेसनमा ८० पोर्ट चाहिन्छ । तर जेडटीईले आधाभन्दा कम पोर्ट भएको बेस स्टेसन जोडेको उनको भनाइ छ । बीटीएस भनेको मोबाइलको तरंग फाल्न विभिन्न ठाउँमा राखिएको टावर हो । बेस स्टेसनले यी टावरलाई व्यवस्थित गर्छ । किन बीटीएसमा भएअनुसारको पोर्ट स्टेसनमा नराखेको प्रश्नमा जेडटीईको भनाइ उद्धृत गर्दै ती कर्मचारीले थपे, 'हामीलाई बीएससीमा यति पोर्ट चाहियो भनिएको छैन । थप चाहिए पैसा थप ।' काम दिने सम्झौतापत्रमा यसबारे पूर्ण विवरण नभएकाले टेलिकम पछि पर्‍यो । यो एउटा समस्या हो टेलिकमको गुणस्तर सुधार नहुनुको । तर न्यून गुणस्तरीय सेवाको कारक उपकरण प्रदायक कम्पनी मात्र हैन । समयमा मर्मत गर्न नसक्ने टेलिकम गुणस्तर बिग्रनुको मुख्य कारण हो । अझ अहिले आएर बीटीएसमा चाहिने सबै उपकरण नभएको समेत खुलासा भएको छ ।
आफ्नै ब्राउजर र सञ्जाल बनाउँदै टेलिकम
काठमाडौं, असोज १४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले युनिफाइड कम्युनिकेसन सिस्टमको नाममा एउटै वेबसाइटबाट सबै प्रकारका सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रविधि ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसन लगायत टेलिफोन, भिडियो च्याटसमेत गर्न मिल्ने गरी नयाँ सेवा सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ। डेढ वर्षअघि टेलिकमले फेसबुकजस्तै सामाजिक सञ्जाल 'एनटी चौतारी' बनाएको थियो। त्यतिखेर परीक्षणकै क्रममा टेलिकम सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएका थिए। संसारभरिका ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई सजिलो बनाउन विभिन्न एप्लिकेसनहरु बनाएर त्यसबाटै सेवा दिन्छन्। 'फेसबुक चलाउन हामीले किनेको ब्यान्डविथमध्ये आधा खर्च भइरहेको छ,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने। ब्यान्डविथ खर्च कम गर्न र टेलिकमका सेवाहरु एकीकृत रुपमा एउटै साइटमार्फत दिन यो सेवा सुरु गर्न लागिएको उनले बताए। स्रोतका अनुसार यो सेवा ६ महिनाअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भएको थियो। 'तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अबनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले टेलिकमले यस्तो वाहियात सेवा चलाउने हो भन्दै निर्णय हुनबाट रोके,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने। अहिले श्रेष्ठको ठाउँमा सूर्य सिलवाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन्। यस्तो प्रकारको नयाँ सेवा सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा सिलवाल सकारात्मक देखिएपछि टेलिकमले सिस्टम किन्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। 'यो सिस्टमको हार्डवयर र सफ्टवेयर किन्न टेन्डर भइसकेको छ, आउँदो जनवरीभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ,' भट्टराईले भने। सञ्चालन टेलिकम र डिजाइन एवं मर्मत सप्लायर्स कम्पनीले गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। ल्यान्डलाइन, मोबाइल, एडिएसएल, वाइम्याक्स सेवा लिने ग्राहकलाई दिइने यस्तो एप्लिकेसन कम्प्युटर र मोबाइल दुवैमा सञ्चालन हुने गरी तयार गर्ने योजना टेलिकमको छ। ग्राहकले वेबसाइट वा एप्लिकेसनबाट दैनिक रुपमा तोकेर निशुल्क वेब एसएमएससमेत गर्न दिने तयारी टेलिकम छ। मोबाइल फोनबाटै वेब एसएमएस लगायत अरु सुविधा प्रयोग गर्न पाएपछि ग्राहकहरु आकर्षित हुने अपेक्षा टेलिकमको छ। वेबसाइटमा 'नेपाली कन्टेन्ट' बनाउनेबीच प्रतिस्पर्धा गराउने तयारीमा टेलिकम छ। 'हामी विदेशी कन्टेन्टमै भरपर्दा हाम्रो रकम नजानिँदो हिसाबले विदेशतिर गइरहेको छ, यसलाई रोक्न जरुरी भइसकेको छ,' भट्टराईले भने।
५२ लाख मोबाइलमा हुवावेको सम्भावना
सरस्वती ढकाल/दुर्गा दुलाल काठमाडौं, ८ असोज - चीनको हुवावे टेक्नोलोजिजले नेपाल टेलिकमको ५२ लाख मोबाइल वितरणको समूह ‘ए’ का लागि पनि ठेक्का पाउने सम्भावना बढेको छ । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबारसम्म प्रतिस्पर्धी स्विडिस कम्पनी इरिक्सन सम्झौतामा नआए हुवावेले नै काम गर्नसक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । हुवावेले हाल समूह ‘बी’ अन्तर्गतको काम गरिरहेको छ । टेलिकम उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबारसम्म इरिक्सनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोले हुवावेले टेन्डर पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । दुवै टेन्डर पाएपछि १ करोड लाइनको महत्वाकांक्षी परियोजनामा हुवावेको एकाधिकार हुनेछ । झन्डै एक वर्षअघि टेलिकमले १ करोड मोबाइल विस्तार गर्न दुई समूहमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समूह ‘ए’ मा ५२ लाख र ‘बी’ मा ४८ लाख लाइन विस्तारको लक्ष्य छ । समूह ‘बी’मा कम दर प्रस्ताव गरेको हुवावेले काम सुरु गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालासले प्रतिस्पर्धी कम्पनी (इरिक्सन) सम्झौतामा नआए हुवावेको बिड सेक्युरिटी फिर्ता नगरी उसैले ठेक्का पाउने फैसला गरेको हो । हुवावेले समूह ‘ए’को पनि टेन्डर पाउने भएपछि सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । हुवावेले आफूले नपाउने टेन्डरमा रहेको ठेक्काका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य धरौटी (बिड सेक्युरिटी) रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै भदौ १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
हुवावे टेन्डरमा सहभागी नभए उसले टेन्डर दाखिला गर्दा राखेको सेक्युरिटी डिपोजिटबापतको ४६ लाख अमेरिकी डलर जफत गर्ने अधिकार टेलिकमलाई छ । यसअघि नै टेलिकमले सोही टेन्डरमा सहभागी भएको चीनकै जेडटीई कर्पाेरेसनको ४६ लाख डलर जफत गरिसकेको छ । गत जेठको दोस्रो साता टेलिकम र हुवावेबीच ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तार गर्ने सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको छ । मर्मत सम्भारसहित करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छ । टेलिकमले आह्वान गरेको टेन्डरबमोजिम ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तारलाई कम्पनीले समूह ‘बी’ मा राखेको थियो । यो समूहमा मध्य र पश्चिामाञ्चल विकासक्षेत्र छन् । टेलिकमले गत वर्ष आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको जेडटीई कर्पाेरेसन, त्यहीँकै हुवावई र स्विडेनको इरिक्सन सहभागी भएका थिए । टेन्डरमा दोस्रो र तेस्रो कम्पनीले सम्झौता नगरे मात्र पहिलो स्थानको कम्पनीले ठेक्का पाउने सर्त छ । यही सर्तअनुसार जेडटीईको रकम जफत भइसकेको छ । मंगलबारसम्म नआए इरिक्सनको पनि जफत हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
Posted by मेरो भनाई at 1:59 AM No comments:
सरकारी कार्यदलको सुझाब : टेलिकमको ३० % शेयर बिदेसीलाइ देउ
दसैंअघि नै टेलिकमको वाइम्याक्स इन्टरनेट
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज ९- टेलिकमले आउँदो दसैंअगाडि नै वाइम्याक्स इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो। टेलिकमले यो प्रविधि सुरु गर्न काठमाडौंमा १५ वटा बिटिएस (टावर) लाई 'अन-एअर' (सञ्चालन) गरिसकेको छ। राजधानीमा ४७ वटा टावरमध्ये आइतबारसम्म ३५ वटा निर्माण गरिसकेको छ। 'दसैं-तिहारबीचमा परीक्षण पूरा गरेर व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्। टेलिकमले सकेसम्म दसैंअघि नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेर महसुल दरसमेत प्रस्ताव गरेर स्वीकृतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल अहिले भोलुमबेस (चलाएको आधार)मा मात्र छ। २५६ किलोबिट प्रतिसेकेण्ड स्पिडका लागि कम्तिमा ५ जिबी दिने प्रस्ताव टेलिकमको छ। त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपैयाँ प्र्रस्ताव गरिएको छ। यही स्पिडमा १० जिबीलाई एकहजार एकसय छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
टेलिकमको प्रस्तावित महसुल
व्याण्डविथ प्याकेज मूल्य (रुपैयाँमा)
२५६ केबिपिएस ५ जिबी ६५०
५१२ केबिपिएस ८ जिबी ८५०
१० जिबी ११०० १२ जिबी १२५०
१५ जिबी १५०० २० जिबी २०००
२० जिबी १८०० ३० जिबी २७००
३० जिबी २५००
Posted by मेरो भनाई at 9:35 PM 1 comment:
टेलिकमको सोधपुछ सेवा :सस्तो गर्न खोज्दा पहिलेभन्दा महँगो
काठमाडौं, असोज ३ (नागरिक)- टेलिकमले सोधपुछ सेवा (इन्क्वायरी) का लागि अहिलेभन्दा पनि बढी शुल्क तिर्नेगरी टेण्डर स्विकृत गरेको छ। टेलिफोनका सबै प्रकारका सेवाको सोधपुछ निजी क्षेत्रलाई दिने क्रममा अहिलेकै कम्पनी हरिदेबी स्टोर्सलाई पहिलेभन्दा प्रतिकल ४५ पैसा बढीमा दिने निर्णय गरेको हो। साधारण टेलिफोनको सोधपुछ सेवा १९७ मा एक कल ह्याण्डल गरे वापत हरिदेबी स्टोर्सले एक रुपैयाँ १२ पैसा लिँदै अएको थियो। अब प्रतिकल एक रुपैयाँ ५७ पैसा दिनुपर्नेछ। सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले परेका चारवटा टेण्डरमध्य सस्तो प्रस्ताव गर्ने हरिदेबीलाई दिने निर्णय गरेको हो। हरिदेबीले मोबाइलको सोधपुछ सेवा (१४९८) लाई प्रतिकल एक रुपैयाँ २९ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै १९१ को लागि प्रतिकल ४३ पैसामा टेण्डर स्विकृत गरिएको छ। 'ल्याण्डलाइनको इन्क्वायरीका लागि पहिलेभन्दा टेलिकमले दिने चार्ज बढेको छ भने मोबाइलको भने घटेको छ,' टेलिकम काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख मधुसुदन कर्माचार्यले भने। जिएसएम मोबाइलको सोधपुछको नम्बर (१४९८) मा कल गर्दा पहिलेभन्दा प्रतिकल एक पैसा कम शुल्क टेलिकमले तिरेहुन्छ। त्यस्तै सिडिएमए मोबाइलको सोधपुछ (१९१) मा भने पहिलेभन्दा ८७ पैसा सस्तो दर हरिदेबीले प्रस्ताव गरेको थियो। हरिदेबी स्टोर्सले गत वर्षको साउनदेखि मोबाइलको सोधपुछ सेवा सञ्चालनको जिम्मा लिएको हो। त्यतिखेर सम्झौता हुँदा प्रति कल औसत ६० सेकेण्ड हुनै पर्नेमा ५० सेकेण्डमात्र भएपछि टेलिकम र कम्पनीबीच विवाद भएको थियो। टेलिकम सञ्चालक समितिले पहिलेभन्दा सस्तो हुने अपेक्षा लिएर पुनः टेण्डर गरेकोमा सबैभन्दा बढी कल हुने नम्बरमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
Posted by मेरो भनाई at 10:20 PM No comments:
एकमिनेट फोन गरेको कहिँ २०० रुपैयाँ कहिँ १ रुपैया !!
सोलुखुम्बु, असोज १ -नागरिक एक मिनेट फोन गरेको शुल्क कति तिर्नुपर्ला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, १, २,५ वा बढीमा सात रुपैयाँसम्म । तर जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र मेरापिकमा भने एक मिनेट फोन गरेको शुल्क रु १८० देखि रु २०० सम्म तिर्नुपर्छ। लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा एसटिएम फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राही चर्को मूल्य तिरेर फोन गर्न बाध्य छन्। एसटिएम फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि यहाँका सेवाग्राहीले महँगो शुल्क तिरेर थोरिया फोनबाट सेवा लिँदै आएका छन्। जिल्लाको विकट कोसीपारिको गाविस बुङको थाङ्ना, थारे र कोठेमा रहेको एसटिएम फोनमा १० महिनादेखि स्याटलाइटमा खराबी आएपछि फोनसेवा अवरुद्ध भएको स्थानीय बासिन्दाले बताए। फोन अवरुद्ध भएपछि यहाँका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी र चौँरीपालक तथा कृषकले समस्या भोग्नु परेको छ । यहाँका सरोकारवालाले अवरुद्ध टेलिफोनका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। एसटिएम कम्पनीले भने चाँडै अवरुद्ध फोन मर्मत गर्ने बताएको छ। रासस
यता नेपाल टेलिकमले भने अधिराज्य भर मात्र १ रुपैयामा फोन गर्ने सुबिधा दिएको घोषणा गरेको छ, टेलिकम स्रोत अनुसार देशभर आफ्नो नेटवर्कमा अव मात्र एक रुपैयामा कुरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ .
टेलिकमको गुणस्तर र मुख्यसचिवको हप्की
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल टेलिकमको सेवा र गुणस्तर अरु कम्पनीको दाँजोमा स्तरीय हुनुपर्छ भन्दै आएका प्रशासक हुन्। गत साता टेलिकमको गुणस्तर बढाउन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको सीमकार्ड दिनुपर्ने उनको धारणा बाहिर आयो। भनाईको आशय थियो- एनसेलको सेवा लिएपछि त्यसैको हाराहारीमा गुणस्तर राख्न टेलिकमलाई दबाब पर्नेछ। सर्वसाधारणले सोच्दा यो पाइला ठीकै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर मुख्यसचिव जस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले सञ्चार मन्त्रालय, विभाग र त्यस मातहतका निकायका अधिकारीका अघिल्तिर जुन तरिकाले हुर्मत लिए, त्यसलाई असहज मान्ने पनि थुप्रै छन्। सबैले अनुभव गरेकै तथ्य हो टेलिकमको मोबाइल जति गर्दा पनि गुणस्तरीय छैन। अर्कातिर केलाई भन्ने गुणस्तरीय भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकरुपमा उठ्छ। कल गर्दा सजिलै लाग्ने र कुराकानी स्पष्ट सुनियो, बीचैमा काटिएन भने त्यो नै नेपालीका लागि गुणस्तरीय हो भने फोन गर्दा लागेन या काटियो भने झुर। यति पनि नभएपछि सेवा लिएका साराले कराउने नै भए। मुख्यसचिव पनि टेलिकमका एक उपभोक्ता हुन्। निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएकाले स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरुसँग सम्पर्कको सहज माध्यम मोबाइल नै हो। त्यही मोबाइलमा कुराकानी गर्दा आवाज स्पष्ट नआउने, काटिने, एउटा कुराकानी पूरा गर्न तीन पटकसम्म कल गर्नुपर्ने भएपछि उहाँले आफ्नो पीडा पनि त्यस दिन मज्जैले पोखे। मोबाइल गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने नाममा जसरी मुख्यसचिवले एमडीलाई त्यस दिन हकारे, त्यो नसुहाउनेखालको थियो भन्नेहरु छन्। मन्त्रालयकै अधिकांश अधिकारीहरु मुख्यसचिव जस्तो पदमा आसिन व्यक्ति निजी कम्पनीको मोडल बन्नु हुँदैनथ्यो भन्दैछन्। शायद मुख्यसचिव एनसेलको उपभोक्ता पनि होइनन्। आफूले सेवा प्रयोग नै नगरेको कम्पनी, जसको वास्तविक गुणस्तर के/कसो छ भन्ने जानकारी नै नलिई त्यसैलाई 'रोलमोडल' बनाउनु पक्कै उचित होइन। केही महिनायता एनसेलको सेवा लिएर पीडित बनेका उपभोक्ता पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। टेलिकमको भन्दा अनुभव, लगानी, व्यवस्थापन र प्रकृयाका हिसाबले एनसेल चुस्त छ। यति हुँदैमा एनसेलको सेवा विश्वमै उत्कृष्ठ भने कदापि होइन र हुँदैन पनि।
एकीकृत लाइसेन्समा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरू अनिच्छुक - चार महिनामा एउटै आवेदन परेन
काठमाडौं, २३ भदौ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिनाअघि साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘युनिफाइड लाइसेन्स’मा जान दुरसञ्चार कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि हालसम्म कुनै पनि माग नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल), स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी युनिफाइड लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । उल्लेखितमध्ये कुनै पनि कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स माग गरेका छैनन् । टेलिकम र एनसेलसँग भने युनिफाइड लाइसेन्स छ । युनिफाइड लाइसेन्सलाई सकारात्मक पहल मानेका स्मार्ट टेलिकमका कार्यकारी अधिकृत सुवास बर्जाचार्य आवश्यकताभन्दा कडा मापदण्ड राखिएकाले कम्पनीहरू अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणले सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा हरेक इलाकामा एउटा बिटीसी टावर राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम तोकेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै लगानी बीटीएस टावर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “कम बस्ती भएका क्षेत्र र धेरै इलाका भएको जिल्लामा धेरै टावर जडान गर्न प्राविधिक रूपमा धेरै लगानी हो,” बज्राचार्यले भने । यूटीएलको रोयल्टी विवाद भएकोले अहिले युनिफाइड लाइसेन्समा जान मिल्ने अवस्था छैन । कम्पनी युनिफाइडमा जान चाहे हालसम्मको बक्यौता रोयल्टी तिरेर मात्रै जानुपर्छ । एसटीएम सञ्चार प्रालिले प्राधिकरणको मापदण्ड पूरा गर्दै तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुराना सर्तका साथै बीटीएस टावर हरेक इलाकामा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै युनिफाइडमा गइहाल्ने अवस्थामा नभएको एसटीएमका एक अधिकारीले बताए ।
युरोपको टेलिया सोनेराको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको हेलो नेपालले गाउँका ग्राहकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी सहरभन्दा गाउँमा लक्षित भई सेवा विस्तार गर्ने टेलिया सोनेराले जनाएको छ । कम्पनीलाई प्राधिकरणले गाउँमा तोकिएको सर्तबमोजिम सेवा पु¥याएपछि सहर आउन पाउने गरी लाइसेन्स दिएको छ ।
Posted by मेरो भनाई at 10:40 PM No comments:
मोबाइल खरिद प्रकरण : एरिक्सनलाई पत्राचार
काठमाडौं, भदौ २४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले ५२ लाख मोबाइल उपकरण आपूर्ति गर्नेबारे वार्तामा आउन युरोपेली कम्पनी एरिक्सनलाई कुरियरमार्फत पत्र पठाएको छ। एरिक्सनको स्थानीय प्रतिनिधिले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित एरिक्सनको कार्यालयलाई टेलिकमले पत्र पठाएको छ। '१५ दिनभित्र वार्तामा आउन एरिक्सनको भारतस्थित कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो। एरिक्सनका स्थानीय प्रतिनिधिले हुवावेको मूल्यमा युरोपेली गुणस्तरको सामान दिन नसकिने जनाएर पत्र बुझ्न मानेका छैनन्। हुवावेले प्रस्ताव गरेको १२ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा एरिक्सनले दिन नसक्ने जानकारी दिनुका साथै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि कुरियर गरेर भारत पठाइएको हो। गत वर्ष टेन्डर खुल्दा भने एरिक्सनले सस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको मूल्यमा दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएकाले टेलिकमले वार्तामा आउन पत्र पठाएको हो। 'त्यतिखेर सस्तो मूल्यमा दिन सक्ने जानकारी एरिक्सनले दिएको थियो,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो। एरिक्सनले ५२ लाख जिएसएम मोबाइलका लागि २४ करोड ३० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो। टेलिकमले गरेको एक करोड लाइनको टेन्डरमा सस्तो प्रस्ताव गर्नेसँगै किन्नुपर्ने प्रावधान छ। एक करोड लाइनलाई दुई भागमा बाँडेर प्याकेज-'ए' मा ५२ लाख र प्याकेज-'बी' मा ४८ लाख लाइन राखिएको थियो। दुवै प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको प्रस्ताव सस्तो परेको थियो। दुवै प्याकेजमा एउटै कम्पनीको सस्तो प्रस्ताव परे पनि एकाधिकार हुन नदिन सस्तो प्रस्ताव गर्नेकै भाउमा दोस्रो महँगो दिन चाहने अर्को कम्पनी तयार भएमा त्यसैसँग किन्ने टेन्डरको सर्त छ। त्यसै अनुसार प्याकेज-'ए' को सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गरेको हुवावेकै दरमा जेडटिईसँग किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। आठ महिनासम्म वार्ता हुँदा पनि जेडटिईले उपकरण दिने चासो नदिएपछि उसको धरौटी ४६ लाख डलर जफत गरेर गत साता टेलिकमले तेस्रो महँगो प्रस्ताव गर्ने एरिक्सनलाई पत्र पठाएको हो। एरिक्सनले सुरुमा चासो दिए पनि हुवावेकै प्रस्ताव (१२ करोड २० लाख डलर) मा मोबाइल उपकरण दिनुपर्ने भएपछि दिन नसकिने जानकारी दिइसकेको छ। गत वर्ष सस्तो हुवावेकै भाउमा दिन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले प्रक्रिया पूरा गर्न टेन्डर भर्ने कम्पनीकै ठेगानामा कुरिएरबाट पत्र पठाइएको टेलिकम स्रोतले बतायो। एरिक्सन वार्ताका लागि आएन भने यो टेन्डरको हकदार चिनियाँ हुवावे नै हुन्छ।
Posted by मेरो भनाई at 2:39 AM No comments:
नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभर १ रुपैयाँ मिनेट कल
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २४ - नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभरि अब जहाँसुकै फोन गरे पनि मिनेटको एक रुपैयाँमात्र लाग्नेछ। टेलिकमले असोजदेखि एसटिडी महसुल हटाएर मिनेटको एक रुपैयाँमात्र बनाउने तयारी गरेको होटेलिकमको नयाँ महसुल प्रस्तावलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ। 'हामीले स्वीकृत गरेको दरअनुसार अब देशभरि टेलिकमको ल्यान्डलाइनमा एसटिडी चार्ज लाग्दैन,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। अहिले एउटै अञ्चलभित्र एसटडी कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँमात्र लाग्छ। तर अर्को अञ्चलमा कल गर्दा भने मिनेटको दुई रुपैयाँ लागिरहेको छ। 'हाम्रो नीति देशभरि एउटै महसुल बनाउने हो,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'त्यहीअनुसार मोबाइल सरह एक रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव पठाएका हौं।'
लोकलमा दबाब एसटिडी महसुललाई घटाउँदै गएको टेलिकमले लोकल कल कम गर्न उपभोक्तालाई मानसिक दबाब दिएको छ। लोकल कल गर्दा बिहान-बेलुका, दिउँसो र राति छुट्टाछुट्टै समयावधि गणना हुने गरेकोमा अबदेखि त्यस्तो सुविधा हुनेछैन। अब जुनसुकै बेलाको पनि दुई मिनेट बराबर एक कल मानिनेछ। राति १० बजेपछि लोकल कल सस्तो हुन्छ भनेर लामो कुराकानी गर्नेलाई अब असर पर्नेछ। अहिले स्थानीय कलमा दिउँसो दुई मिनेट बराबर एक कल हुन्छ भने बिहान बेलुकी चार मिनेटको एक कल छ। राति १० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहानसम्म ८ मिनेटको एक कल हुन्छ। यसलाई परिवर्तन गरेर टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट कल गर्दा चौबीसै घन्टा दुई मिनेट बराबर एक कल गणना गर्ने भएको छ। 'एसटिडीलाई हटाएर मिनेटको एक रुपैयाँमा झार्दा आयमा हुने असरलाई घटाउन स्थानीय कललाई एउटै बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने। अहिले कायम रहेको स्थानीय कलको समय टेलिकमले २०५९ सालमा लागु गरेको हो। त्यतिखेर स्थानीय कलको अवधि तीन मिनेट बराबर थियो। २०५९ सालमा तीन मिनेटलाई फेरेर बिहान बेलुकीलाई चार मिनेट, दिउँसोलाई दुई मिनेट र राति ८ मिनेटको एक कल बनाइएको थियो। २०५१ सालअघि लगातार जति मिनेट कुराकानी गरे पनि एक कलमात्र हुन्थ्यो। त्यतिखेर लोकल कलको असीमित समयलाई कटौती गरेर तीन मिनेट बनाइएको थियो। तीन मिनेटको समयलाई फेरि २०५९ सालमा फेरिएको हो। यसपटक प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब हरेक दुई मिनेटमा एक कल बराबरको महसुल चढ्दै जाने भएको छ। 'हामीले असोज १ बाटै नयाँ महसुल दर लागु गर्नेगरी काम सुरु गरेका थियौं,' प्रधानले भनिन्। प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति नभएकाले नयाँ महसुल पारित हुन समय लागेकाले कार्यान्वयनमा केही थप समय लाग्नसक्ने भएको छ।
असोजभित्रै नयाँ महसुल कार्यान्वयनमा ल्याउने टेलिकम अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ महसुल दर लागु गर्न कम्तीमा दुई साताको तयारी चाहिन्छ। असोज १ देखि लागु गर्न नभ्याउने भएकाले १५ गतेदेखि लागु गर्ने तयारी टेलिकमको छ। देशभरि एसटिडी फोनको एउटै दर भए पनि बिलिङ भने लोकल कलको रुपमा हुँदैन। एसटिडीकै रुपमा बिलिङ हुन्छ र मिनेटको एक रुपैयाँ महसुल लाग्छ। टेलिकमले मासिक दुई सय रुपैयाँमा एक सय ७५ लोकल कल गर्न दिन्छ। एक सय ७५ कलभन्दा माथि उठे थप महसुल लाग्छ। साउन १ गतेदेखि टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट टेलिकमकै देशभरिका मोबाइलका कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँमात्र महसुल लगाएको थियो। एउटा अञ्चलबाट अर्को अञ्चलको मोबाइलमा फोन गर्न एसटिडी सुविधा हुनुपर्नेमा टेलिकमले हटाएको थियो। मोबाइलबाट मोबाइलमै कल गर्दा देशभरि जहाँ गरे पनि एक मिनेट बराबर एक रुपैयाँमात्र छ
टेलिकमको गुणस्तर सुधार्ने नौलो उपाय
काठमाडौं, भदौ २० (नागरिक) - पटकपटक दिइएको निर्देशनले मोबाइल टेलिफोनमा सुधार नभएपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नयाँ उपाय निकालेका छन्। उनले मंगलबार त्यो उपाय सार्वजनिक गरे। उनको उपाय हो-टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई एनसेलको मोबाइल उपहार। 'प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच कुराकानी हुँदा धेरैपटक अप्ठेरो परिसक्यो,' उनले भने। नसुनिने, काटिने, आवाज स्पष्ट नआउने समस्या भएपछि प्रधानमन्त्रीले सुधार्न असाध्यै चासो दिएको उनले बताए। निर्देशनले मात्र टेलिकमको मोबाइल सुधार नहुने भएकाले अर्को कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दा मानसिक दबाब हुने भएको हुँदा एनसेलको मोबाइल उपहार दिने योजना बनाइसकेको उनले सार्वजनिक गरे। 'मानसिक पीडा होला भनेरमात्र अहिलेसम्म यस्तो कदम नचालिएको हो,' उनले भने। मंगलबार सञ्चार मन्त्रालय निरीक्षणको क्रममा पुगेका मुख्य सचिव पौडेलले झन्डै डेढ घन्टासम्म अन्तर्त्रि्कया गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायका समस्याको जानकारी लिनुका साथै निर्देशनसमेत दिएका थिए। पौडेल साढे तीन वर्षअघि सञ्चार सचिव थिए। त्यतिखेर उनी टेलिकम सञ्चालक समितिमा सदस्यसमेत थिए। त्यतिखेरदेखि उनले कुराकानी गर्दा समस्या भएपछि सुधार्न निर्देशन दिएका थिए। संयोग कस्तो परेको छ भने सिंह त्यतिखेर पनि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक थिए।
Posted by मेरो भनाई at 8:50 PM No comments:
हुवावेले मोबाइल ठेक्का अस्विकार गर्ने
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १७ - जेडटीई कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई उपकरण बेच्नभन्दा धरौटी राखेको ४२ करोड रुपैयाँनै गुमाउन उचित ठानेको ५२ लाख मोबाइलको प्रकरणमा अर्को चिनिया कम्पनी हुवावेले समेत ठेक्का अस्विकार गर्ने भएको छ। यो घटनाले अब टेलिकमको भाग्य र भविष्य युरोपिएन कम्पनी इरिक्सनको हातमा निर्भर भएको छ। ११ महिना अघि खोलिएको ठेक्कामा सबैभन्दा सस्तो दिन प्रस्ताव गरेको हुवावेले समेत ५२ लाख मोबाइल दिन नसक्ने संकेत दिएको छ। टेलिकमले धरौटी (बिडबण्ड) को म्याद थप्न दिएको निर्देशनलाई हुवावेले अस्विकार गरेपछि ५२ लाख मोबाइल उपकरण दिन तयार नभएको संकेतका रुपमा टेलिकम अधिकारीहरुले हेरेका छन्। 'इरिक्सनले यो ठेक्का स्विकार गर्योक भने लफडा नपर्ला, तर अस्विकार गर्योप भने फेरि टेण्डरमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। युरोपको इरिक्सन कम्पनीले ५२ लाख मोबाइलको लागि २४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। यो कम्पनीले उपकरण दिन चाहेमा आधा घटेर १२ करोड २२ लाख डलरमै दिनुपर्छ। टेलिकम स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म इरिक्सनले ५२ लाख मोबाइलको प्रस्ताव हुवावेकै मूल्यमा स्विकार गर्ने संकेत दिएको छ। 'अस्विकार गर्ने भए धरौटी वापत राखिएको ४६ लाख डलरको म्याद ६ पटक थप्ने थिएन,' आशावादी हुँदै टेलिकम अधिकारीले भने।
टेलिकमद्वारा चिनियाँ कम्पनी जेडटिईको ४२ करोड जफत
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १३ - नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी जेडटिईले बिडबन्ड (धरौटी) बापत राखेको झन्डै ४२ करोड रुपैयाँ जफत गरेको छ। टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको एक करोड मोबाइलका लागि जेडटिईले ५२ लाखको ठेक्का पाएको थियो। तर, ठेक्काअनुसार सम्झौता गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि चासो नदिएपछि टेलिकमले उसको धरौटी जफत गरेको हो। टेलिकमको व्यवस्थापनले जेडटिईले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा राखेको ४६ लाख अमेरिकी डलर धरौटी गत शुक्रबार जफत गरेको हो। 'धरौटी जफतको निर्णयलाई सञ्चालक समितिले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ,' स्रोतले भन्यो। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिले धरौटी जफतको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै टेन्डरमा तेस्रो भएको कम्पनी इरिक्सनलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। 'एक करोड लाइन मोबाइल उपकरणमा इरिक्सन तेस्रो भएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'हुवावेले स्वीकारेको मूल्यमा सामान दिन तयार भए नियमअनुसार इरिक्सनसँगै किन्छौं।' नेपाल टेलिकमको इतिहासमै यति ठूलो रकम उपकरण निर्मातासँग जफत गरिएको यो पहिलो हो। जफत गरिएको ४६ लाख डलर टेलिकमको खातामा आइसकेको समेत टेलिकमका अधिकारीले बताए। गत वर्ष खोलिएको एक करोड जिएसएम मोबाइलको टेन्डरमा टेलिकमले अनुमान गरेको रकमको साढे दुई प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र फर्म बुझाउन पाउने सर्त थियो। त्यही साढे दुई प्रतिशत रकमले हुन आउने ४६ लाख डलर रकम जेडटिईले धरौटी राखेर टेन्डरमा सहभागी भएको थियो। अर्काे चिनियाँ कम्पनी हुवावेले ४८ लाख मोबाइल उपकरणको ठेक्का पाएर काम सुरु गरिसकेको छ।
पुलिसलाई टेलिकमको साथ निरन्तर...
पूर्वी एसियामा दुई वर्षभित्र मोबाइलमा रोमिङ फ्री प्रस्ताव
काठमाडौं, भदौ ११ (नागरिक)- सार्क क्षेत्रका मुलुकले चार वर्षअघि गरेको फोनको आइएसटिडी शुल्क घटाउने घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका मोबाइल कम्पनीले भने दुई वर्षभित्र एक अर्को देशमा रोमिङ निशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। हालै इन्डोनेसियाले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) बीच रोमिङ सन् २०१४ सम्म निशुल्क गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यी देशबीच अहिले एउटा देशको मोबाइल अर्को देशमा लैजादा लाग्ने रोमिङ शुल्क निकै कम छ। संसारभरि कुराकानी गर्ने भ्वाइस सेवाभन्दा डाटा सेवा सस्तो हुँदै गएको छ। स्मार्टफोनमा हुने भाइबर, ट्यांगोजस्ता एप्लिकेसनले निशुल्क कुराकानी गर्ने सुविधा थपेपछि आसियानले 'रोमिङ फ्री जोन' का रुपमा आफूलाई पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको हो। आसियानमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस्, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम सदस्य छन्। रोमिङ निशुल्क भएपछि एउटा देशको मोबाइल उपभोक्ता आसियानको अर्को देशमा जाँदा फोन रिसिभ गर्दा र कल गर्दा थप शुल्क तिर्नुपर्दैन। युरोपिएन युनियनका देशले समेत रोमिङ फ्री गर्ने तयारी गरेका छन्। युरोपिएन युनियनका देशमध्ये अहिले रोमिङ शुल्क प्रति मिनेट ६४ सेन्टभन्दा बढी छैन। सबैभन्दा सस्तो रोमिङ शुल्क रोमानियाको छ। जहाँ प्रति मिनेट ४९ सेन्टभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन।
Posted by मेरो भनाई at 11:37 PM No comments:
टेलिकमले एनसेलमा ‘कल फरवार्ड’ रोक्यो
२३ साउन, काठमाण्डौ । एनसेलले प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक तान्ने अभियान थालेपछि नेपाल टेलिकमले एनसेलका लागि कल फरवार्ड सुविधा काटेको छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार एनसेलले टेलिकमका पोष्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरसँग मिल्ने नम्बर दिने एनसेलको ‘माइ न्यू नम्बर’ योजनाका लागि एनसेलले कलफरवार्ड सुविधाको दुरुपयोग गरेपछि टेलिकमले आफ्नो नेटवर्कका मोबाइलबाट एनसेलमा कल फरवार्ड सुविधा बन्द गरेको हो । ‘केहि समयका लागि रोकिएको हो, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको छलफलपछि खुल्न सक्छ’ टेलिकम स्रोतले भन्यो ।
एनसेलले प्रतिस्पर्धी कम्पनीका ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमा आकषिर्त गर्न ‘एनसेल प्रो’ योजनामा विभिन्न सुविधा दिँदै आएको छ । टेलिकमबाट एनसेलको नेटवर्कमा सर्न चाहनेले चलाइरहेको टेलिकमको नम्बर एनसेलममा जानकारी गराएपछि एनसेलको त्यही नम्बर दिने गरेको छ । टेलिकमको मोबाइलबाट एनसेलमा कल फरवार्ड गरेपछि एनसेलले उक्त नम्बरमा फोन गर्नेजति सबैलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर परिवर्तन भएको भनेर एनसेलको नम्बर दिने र टेलिकमको मोबाइलमा भने फलानो नम्बरबाट कल गर्ने प्रयास भएको थियो भन्ने सन्देश दिने गरेको थियो । टेलिकमका ग्राहकलाई एनसेलले तान्न खोजेपछि टेलिकमले एनसेलमा कल फरवार्ड रोकेपछि यो योजना अहिले रोकिएको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन म्यानेजर सञ्जु कोइरालाले भनिन्, ‘नेपाल टेलिकमले यस योजनामा आपत्ति जनाएपछि हामीले यसको प्रमोसन नै रोकिरहेका छौं ।’ यस विषयलाई लिएर नेपाल टेलिकम नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जाने भएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र प्रसाद थिकेले त्यसखालको गतिविधि भएपछि टेलिकम प्राधिकरण जान लागेको जानकारी दिए । एनसेलले गलत प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि गरे टेलिकमले पनि त्यसै अनुसारको रणनीति बनाउने बताए ।
Posted by मेरो भनाई at 2:56 AM No comments:
दूरसञ्चार क्षेत्र अर्को गन्जागोलमा (समाचार टिप्पणी)
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, साउन २२- युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कणेल राजिनामा गरेर बाहिरिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रनै थप गन्जागोलमा फँसेको छ। सञ्चारमन्त्रीको दवाव र आफूलाई नियुक्त गर्ने एकीकृत माओबादीकै असहयोगपछि राजीनामा दिएका कणेलले आफ्नो टाउको हलुका पारेर दूरसञ्चार क्षेत्रलाई भने सबैभन्दा ठूलो भारी छाडेका छन्। 'अध्यक्षको अभावमा कुनै इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्नदेखि टेलिफोनका उपकरण ल्याउनका लागि सिफारिस समेत दिन सकिदैन,' प्राधिकरणका उपनिर्देशक कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। अध्यक्ष नहुँदा बोर्ड बैठकसमेत बस्न नमिल्ने हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन निकै चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ। रोयल्टी उठाउने, नवीकरण शुल्क तिर्नेदेखि लिएर फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई व्यबस्थित गर्ने प्रकृया समेत अब रोकिएका छन्। युटिएलको नवीकरणको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो रहेको प्राधीकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्। युटिएलले एकातिर रोयल्टी एकअर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने अर्कातिर लाइसेन्स नवीकरणको लागि गत असारमै ९ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। राजीनामा दिएर बाहिरिएका अध्यक्षले सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखेर युटिएलसँगको अन्तरआवद्धता समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। यो निर्देशनलाई समेत पालना गराउन प्राधिकरणलाई निकै अप्ठेरो परेको छ। यो निर्देशनको विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु समेत विभाजित भएका छन्। केही अधिकारीहरु भने तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् भने केहीले केही दिन पर्खेर हेर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
Posted by मेरो भनाई at 12:18 AM No comments:
टेलिकमले प्रिपेड ग्राहकलाई बाँड्यो १६ करोडभन्दा बढ...
टेलिकमको वाइम्याक्स सुरु, निजी कम्पनीलाई दिने योजन...
काठमाडौंमा कात्तिक २७ देखि वाइम्याक्स इन्टरनेट (रे...
सरकारी कार्यदलको सुझाब : टेलिकमको ३० % शेयर बिदेसी...
टेलिकमको सोधपुछ सेवा :सस्तो गर्न खोज्दा पहिलेभन्दा...
एकमिनेट फोन गरेको कहिँ २०० रुपैयाँ कहिँ १ रुपै...
एकीकृत लाइसेन्समा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरू अनिच्छुक...
नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभर १ रुपैयाँ मिने...
पूर्वी एसियामा दुई वर्षभित्र मोबाइलमा रोमिङ फ्री प...
दूरसञ्चार क्षेत्र अर्को गन्जागोलमा (समाचार टिप्पणी...